Filoham-pirenena tany Antsiranana : « Ny tsirairay no mila mandray an-tanàna ny fampandrosoana ” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloham-pirenena tany Antsiranana : « Ny tsirairay no mila mandray an-tanàna ny fampandrosoana ”
«Tsy ny olona any ivelany no antsointsika hampandroso ny firenena ». Ampahany tamin’ny resadresaka nifanaovan’ny filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny mpanao gazety io raha niatrika hetsika maromaro tany Antsiranana izy ny herinandro lasa teo. Laha-teny izay niantsoany ny malagasy rehetra hitondra ny anjara birikiny sy handray an-tanana ny fampandrosoana. « Tokony harovantsika voalohany ny fiandrianam-pirenena… zava- dehibe ihany koa anefa ny fanajana ny soatoavina malagasy », hoy izy nanao antso avo manoloana ny zava-misy eo amin’ny fiarahamonina ankehitriny toa ny fitsaram-bahoaka, ny vono olona… Nitodika manokana tamin’ireo tanora izay ho avin’ny firenena izy nanoloana izany ary hijoro hanohitra izany. « Tsy tokony ho amin’ny fifampiantsiana na fananganana ady, fitenenana ratsy sy fanalam-baraka fa mifampiteny, mifananatra ary miaro ny fihavanam-pirenena », hoy ihany ny filoham-pirenena izay mbola nanamafy fa « Fotoana izao tokony hifohazan’ny Malagasy ary fara-faharatsiny ho arofanina voalohany entina amin’ny fampandrosoana ny soatoavina ». EFa nisy ny andraikitra noraisin’ny fitondram-panjakana tamin’ireo mpitantana tsy nahitam-bokany teo amin’ny sehatry ny fandriampahalemana na tsy natao nitabataba aza izany.
Na izany aza, tsy afaka hiambo ho mahavita tena eo amin’ny fampandrosoana isika, ary nasongadin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fifanakalozan-kevitra ara-politika natao tany Antsiranana niaraka tamin’ny vondrona eoropeana ny « fiaraha-miasa tsy misy fanavahana na fanilikilihana ». « Tsy ampy fotsiny ny herin-tsika eto an-toerana fa tsy maintsy miantso mpamatsy vola na mpandraharaha avy any ivelany isika. Afaka mitodika amin’ny rehetra izay vonona hampandroso ny firenentsika, nefa ao anatin’ny fanajana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombotsoa iombonana », araka ny fanazavana nentiny. Tafiditra amin’izay fiaraha-miasa amin’ny any ivelany izay ny fametrahana ireo faritra manokana ara-toekarena na ZES izay ahitana an’Antsiranana, Taolagnaro ary Toliara. Tafiditra amin’io tetikasa io ny fametrahana fotodrafitrasa ho an’ny fampandrosoana. « Ny mpamatsy vola voalohany dia ny fanjakana Malagasy ary ny fotodrafitrasa rehetra atao dia tafiditra amin’ny fandaharan’asam-pirenena ho an’ny fampandrosoana », araka ny fanazavan’ny filoha. Rehefa mipetraka ny fotodrafitrasa toy ny seranan-tsambo, seranam-piaramanidina sy ireo fandraharahana ara-bola samihafa dia atao ny fiantsoana ireo mpamatsy vola sy mpandraharaha afaka ny hitondra fampandrosoana.
Mikasika izay fiaraha-miasa amin’ny mpamatsy vola izay dia nanamarika ny filoha fa « mila mandroso amin’ny asa mihoatra amin’ny fandeha teo aloha satria ny vahoaka tsy afaka miandry ». Nandritra ilay fihaonana in-droa isan-taona miaraka amin’ny vondrona Eoropena dia efa nisy ireo ho tanterahina toy ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-6 Ambanja ka hatrany Antsiranana, ny fanatsarana ireo vokatry ny fambolena… Mivelatra anefa io fiaraha-miasa io ary anisan’ireo ohatra nomeny ihany koa ny famatsiam-bolan’ny Banky iraisam-pirenena ho fanatsarana ny lalana ao an-tampon-tanànan’Antsiranana sy ny famatsian-drano… « saika fotodrafitra efa mihoatra ny 30 taona no mbola ampiasaina ankehitriny ary miezaka manavao izany ny fitondrana amin’izao fotoana », hoy hatrany izy.
Tetsy ankilan’izay, nanaovan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny fisian’ireo mpanao politika manosika ambadika amin’ireo toe-javatra samihafa mitranga eto amin’ny firenena ka manao izay hisian’ny korontana na hemetrahana tranga hanasoketana ny fitondram-panjakana ankehitriny. « Ny toe-tsaina no tokony hovaina raha tiana ny hampandroso ny firenena », hoy ny filoha .«Misy manararaotra ao. Miandry ho faizina sy ho gadraina foana ve ? Sady miantso ny lalàna no miantso ny rehetra amin’ny feon’ny fieritreretana », hoy ihany izy raha nandray ohatra ny vidim-bary amin’ny fisian’ireo mpanararaotra.
Fitsarana avo mitsara ny mpitondra fanjakana
« Ireo rehetra miteny lava ny momba io rafitra io dia mahafantatra tsara ny antony tsy mbola isian’ny fanendrena », hoy indray ny filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny fananganana ny Fitsarana avo mitsara ny mpitondra fanjakana. Misy ny fepetra arahina amin’ny fametrahana azy io ary isan’ny manamarina ny fanajana izany fepetra izany ny filoham-pirenena. Nisy tamin’ireo mpikambana efa voatendry ihany koa no fantatra fa misy olana. « Mila mitandrina isika, mora ny manao fanakianana fa ny manao zavatra tsy maintsy atao am-pahamalinana », hoy hatrany ny filoha. Toy izany koa ny fanendrena ireo masoivoho izay miankina ihany koa amin’ireo firenena any ivelany.
Mbola manodidina ny 3.000 tapitrisa Ar isan-taona ny famatsiam-bola ataon’ny fanjakana amin’ny oriansa Jirama. Manoloana izany dia tsy maintsy tadiavina ny hevitra hampihenana io famatsiam-bola io izay tokony handeha amin’ny zavatra hafa. Anisan’izany ny fampiasana ny solika mavesatra amin’ireo milina samihafa mandeha tamin’ny gazoala. Ho vita ao anatin’ny roa volana ny fametrahana ireo milina hiarahana miasa amin’ny sehatra tsy miankina toy ny Symbion Power, Ny Tak Mining hiarahana amin’ny Jovenna ary ny Aksaf power izay hamokatra angovo manodidina ny 190Megawatt. Tsy azo iodivirana ihany koa anefa ny fitrandrahana ny herin’ny masoandro izay efa manomboka ny asa. Toy izany koa ny fakana herin’aratra avy amin’ny rian-drano.